Logitech MX Ergo, trackballs inogona kupa yakawanda yehondo | Ndinobva mac
Logitech MX Ergo, trackballs anogona achiri kupa yakawanda yehondo
louis padilla | | Accessories, dzakawanda
Kwemakore ndanga ndiri mutendi mu trackpad. Zvinogona kutaurwa kuti kubvira pandakatanga kushandisa yangu yekutanga Mac ini ndabva mukuvenga iyo trackpad yemabhuku ekare emabhuku ekunyora kuva anoyemura kwazvo, vachiisa mbeva padivi. Nekudaro, iyo nyowani MX Ergo kubva kuLogitech yakabata pfungwa dzangu kubva pakaziviswa, pamwe nekuti kwenguva yakareba, ndisati ndave mushandisi weMac, ndaishandisa trackball zvakare kubva kuLogitech.
Mugari wenhaka yezvakawanda zvezvinhu zvakaita kuti Logitech MX Master uye MX Master 2S ibudirire, izvi MX Ergo anotipa izvozvi zvekare mabhatani ekugadzirisa ane system yekutonga kuburikidza nebhora ratinoita nechigumwe pasina chikonzero chekufambisa ruoko., uye mukana wekugadzirisa kunyange mafungiro eergonomics yakakura. Takazviongorora uye tinokuudza zvatinoona.
1 Ergonomics inotorwa kune yakanyanya
2 Mabhatani anogadziriswa
3 Bluetooth yekubatanidza
4 Maonero emupepeti
Ergonomics inotorwa kune yakanyanya
Trackballs anga ari munyika yemakomputa akareba kupfuura mbeva dzakajairika, zvisinei ivo vakatadza kuwana nzvimbo pakati pevashandisi vanoramba vachizviona sechinhu chisingazivikanwe uye chakaoma kubata parutivi. Hapana chingave chinowedzera kubva pachokwadi, nekuti zvakanyanya sezvazvinogona kuita kunge kubata bhora kwakanyanya kuomarara pane kufambisa mbeva patafura, chokwadi ndechekuti iwe munguva pfupi unowana iyi system yekudzora uye iri nyore kwazvo. Neiyi Logitech trackball ruoko rwako ruchazorora chose pariri, pasina kufambisa chero chinhu chinopfuura chigunwe chako uye indekisi nepakati minwe kuti usvike mabhatani ese anosanganisira MX Ergo.
Kune izvi tinogona kuwedzera mukana wekugadzirisa mafungiro etraki kuitira kuti tigadzikane nepatinogona napo. Ini ndasarudza chinzvimbo chakanyanya kurerekera kuruboshwe, kwandiri zvakanyanya zvakasikwa kupfuura chimwe. Iko hakuna mapoinzi epakati, sezvo iri magineti base inodzika munzvimbo mbiri pasina mukana wekugadzirisa zvakanak.
Parizvino hatina kutaura chero chinhu chakasarudzika nezve iyi trackball inoiisa parutivi kubva kune echinyakare asina kumboshanduka mumakore Pero chinhu chakanakisa nezve iyi MX Ergo ndeyekuti inosanganisa zvavakafarira zvakanyanya nezveMX Master yechiratidzo chimwe chete: mabhatani ayo anogadziriswa. Ivo vanowanikwa pasina kuita mitezo neruoko, minwe nenzira yakasikwa chaizvo inosvika mabhatani ese, uye kunyangwe pakutanga inogona kuve inovhiringidza, iwe unobva waishandisa.
Iyo MX Ergo ine vhiri rekutsikisa iro rinogona zvakare kumanikidzwa uye kupururudzwa kuruboshwe uye kurudyi, maviri "akajairwa" mabhatani kuti ubaye pachiratidziri, bhatani rekubatanidza kune komputa uye nendangariro mbiri dzinokutendera kuti ushandise kushandiswa nemakomputa maviri nekungodzvanya, mabhatani maviri anogadziridzwa kuruboshwe uye rimwe bhatani rinokutendera kuti uchinje kumhanya kwe pointer kune rimwe basa chairo.
Zvese izvi zvinogona kugadziridzwa pamwe nekushandisa iko Logitech ine yeWindows uye Mac (link), uye zvakakosha kuti tikwanise kutambisa zvishoma zvenguva yedu tichitarisa kuwanda kukuru kwekugadziriswa kunogona kutipa kuti tiwane izvo zvinotifadza zvakanyanya. Vhara zvinoshandiswa, Mission Kudzora, kuratidza desktop, zoom, scroll uye kunyange mamwe mabasa epamberi, kugona kunyange kusanganisa makiyi bhatani bhatani. Ehe inowirirana ne "Kuyerera", iyo Logitech sarudzo iyo inobvumidza iwe kudzora kusvika kumatatu madhizaini uye kudhonza mafaera pakati pemakomputa.
Ndakagara ndichiedza kunzwisisa chikonzero nei kufarira kwevakawanda vagadziri mukutipa mbeva dzisina waya uye makiribhodi asi ivo vakatimanikidza kushandisa kwavo kubatana kwakabata USB yemuchina wedu. Neraki Logitech haina kuita izvi neayo MX Ergo, nekuti ine Bluetooth yekubatanidza. Hongu, inosanganisira Unifying receiver asi zviri kwauri kuti uishandise kana kusarudza Bluetooth, sarudzo yandakasarudza. Sezvandambotaura, kuchinjika pakati pemakomputa maviri, iMac yangu neMacBook yangu, iri nyore sekudzvanya bhatani diki riri pazasi pevhiri remupumburu. Nhamba mbiri dzinokuyeuchidza nezvekubatana kwauri kushandisa.
Kuzvimiririra kweiyi MX Ergo harisi dambudziko, nekuti kubhadharisa kwakazara kwetrackball kuchakupa kusvika kumwedzi mina yekushandisa zvakajairika, uye kana ukambopererwa nebhatiri usingatarisiri, saka haufanire kumirira kuti ugone kuishandisa. Inobhadhariswa kuburikidza neiyo microUSB tambo inouya mubhokisi uye inobatana kumberi kwetrackball, sekunge yaive yakajairika wired mbeva.
Trackballs haisi yemunhu wese, izvo zvinofamba pasina kutaura, asi kana rusaruro rwekutanga rwakundwa, iyi MX Ergo ichaita kuti vazhinji veavo vayedze. Icho chigadzirwa chakanakisa chinokutendera kuti ushande kwemaawa pasina matambudziko (nemabara ako anosungirwa). Iwo mabhatani anogadzirisika anova chimwe chinhu chausingakwanise kuita iwe kana uchinge wajaira kwavari, uye mukana wekuishandisa nemakomputa maviri pakusundira bhatani zvinoita kuti chishongedzo chaunogara uchida kutakura kunyangwe uine laptop yako. Izvo zvakandikurudzira kuti ndisiye iyo trackpad ... kazhinji kazhinji yenguva. Ehe, kana iwe uri wekuruboshwe-ruoko kana kudzidza kuibata nerudyi, nekuti hapana mukana wekuishandisa nayo kuruboshwe. Unayo inowanikwa mu Amazon kubva € 107
Ergonomic uye inogadziriswa kunyaradza
Inoenderana neWindows uye macOS
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » Logitech MX Ergo, trackballs anogona achiri kupa yakawanda yehondo
Ungachinja sei makavha emabhuku ako mumaBooks